Semalt Expert Assure Unofanirwa Kudzivirira A Website Kubva Hack Hack - Heinoi Sei
Kune marudzi akawanda ekurwiswa kwakaipa pamusoro peInternet. Vanhu vazhinji vanotarisana nemabasayevashandi vakawanda muzuva ravo zuva nezuva uye pamwe nemabasa avo. Vanotsvaga vanopedza nguva yakawanda yakaedza kuedzanzira dzakasiyana dzavanokwanisa kushandisa kuti vaite mabasa avo. Nzira idzi dzakawanda dzinosanganisira mabasa akadai sokurwisa DDOS kana kunyange nzvimbo yepamusoroscripting - modelo de oculos ray ban. Zvose izvi zvinorwisana zvine vavariro yezvoudyire shure uye kutambura kwakanyanya kune avo vakaurayiwa.
Kazhinji, vatengesi vanogona kutora webhusaiti yako nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Kazhinji, vangavekubika shandisa mashoko sekukwereta kadhi rechikwereti kana kunyange iyo admin panel hacks. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, munhu anokanganisa anogona kuba anokosharuzivo kubva kune webhusaiti yakadai semashoko omutengi uyewo logins yezvinhu zvakasiyana-siyana zvekambani. Hackersinogonawo kusimbisa makwikwi asina kukodzera apo muchengeti anogona kukonzera pasi webhusaiti yako kana Search Engine Optimization (SEO) yako iri mua variety of ways. Somugumisiro, zvakakosha kuchengetedza hurongwa hwako kubva kuvashambadzi.
Jack Miller, nyanzvi inotungamirira kubva Semalt ,rinotsanangura pane dzimwe nzira dzinogona kukuchengetedza kure nekurwisa kwevanhu ava:
Kuchengetedzwa kwekupinda musina kutenderwa
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kuwanikwa nemuparadzi pawebsite yako iri kuedza kupinda se admin.Somugumisiro, mutengesi anogona kuedza kufungidzira mamwe mapepa ekuona kuti ndeupi wavo angawa nekuda kwekusaziva kwako. Kushandisa passwords kuchengetekainokosha. Pepwords sezvakaitwa 12345 hazvina kuchengetedzeka uye zvinogona kuzarura webhusaiti yose kune muchengeti. Uyezve, haufaniri kushandisa passwordizvo zviri nyore kwazvo kuzvifungidzira. Mashoko akafanana nezita romwana wako anogona kunge akafungidzira zvakakwana kune munhu ane zivo iyi. Pane kudaro, sanganavanhu vakasiyana-siyana vane mafomu akasiyana-siyana.
Ichi chinhu chinyorwa chinoda kuguma kwemushandisi. Izvi zvinosanganisira kushandiswa kwevamwemafomu uye zvinyorwa masimiro amunoshandisa, sefomu yekubhadhara. Munhu anokanganisa anofambisa purogiramu yekunyorera pane fomu yekushandisa ine script. Onkurova kupinda, script inotanga kushanda pane yako seva. Somugumisiro, muchengeti anowana ruzivo kune yese yevashandi data, kusanganisira iyokeystrokes mutengi anorambidza chero nguva iyo vari kutamba matanda pawebsite yako. Kugadzirisa izvi zvinotambudza, unoda nzira yekunyoresaruzivo rwemafomu ako usati wavapa kudhekisi rako. Somugumisiro, script haigoni kutarisa pane database yako sezvo pane ikozvinozviyero munzvimbo kuti zviite kuti zvirege kumhanya.
Pamusoro pebhizimisi re e-commerce, kuchengetedzwa kwekuchengetedza kwekuchengetedza kwekuchengetedza kwekunyanya kunonyanya kunetseka kana zvasvikakuInternet kushanda. Pane vakawanda vanoedza kutengesa uye vanhu vangave vanoda kutyisa webhusaiti yenyu nekuda kwewebsite dzakawanda. Kuchengetedzwa kwakonzvimbo, pamwe chete nehupenyu hwevatengi vako, zvakanyanya kuvimba nemabasa ako se admin.